What is the difference between Chrome and Chromium ? | TechSectors
Google Chrome ကို ခုနောက်ပိုင်း တော်တော်များများ သတိထားမိလာကြပြီ - Browsers လောကမှာ သူ့ရှေ့က အိုမင်းရွတ်တနေတဲ့ Browsers ပေါင်း မြောက်များစွာကို ကျော်ဖြတ်ပြီး January 2011 မှာ အမြန်ဆုံး - အပေါ့ဆုံး - အပြစ်အကင်းဆုံး နဲ့ ကမ္ဘာ့လူသုံးအများဆုံး တတိယမြောက် Browser တစ်ခုအဖြစ် ရပ်တည်နိုင်လာခဲ့ပါပြီ - အဲ့တော့ Google Chrome ကို သိပြီဆိုကြပါစို့ -
( ၁ ) သူ့နောက်ကွယ်ကနေပြီး သူ့ရဲ့ ရပ်တည်မှုကို ယိုင်လဲမကျအောင် အဓိက ပံ့ပိုးပေးနေတဲ့ ဇာတ်ရံနေရာရောက် အဓိက ဇာတ်ဆောင်မင်းသား Open-source browser "Chromium" ဆိုတာကော ကြားဖူးကြပါရဲ့လား ??
( ၂ ) ကြားဖူးတယ်ဆိုရင် Google Chrome နဲ့ Chromium က ဘာတွေ ကွာသလဲ ?? ဘယ်ဟာတွေ ဘယ်လိုကွာပြီး တစ်ခုချင်းစီမှာ ဘာတွေများ အားသာချက် အားနည်းချက်တွေ ရှိနေသလဲ ??
( ၃ ) တကယ်လို့ Google က Chromium team ရဲ့ code ကို ယူသုံးနေတာဆိုရင် ဘာလို့များ Chromium team က အပင်ပန်းခံပြီး ဒီ project ကို လုပ်နေရတာလဲ ??
( ၄ ) Open-source browser ဆိုတဲ့ သဘောကိုရော နားလည်ခ့ဲကြပြီလား ??
Chromium projects မှာ Chromium လို့ ခေါ်တဲ့ Open-source browser နဲ့ Chromium OS လို့ ခေါ်တဲ့ Open-source OS project ဆိုတဲ့ Projects နှစ်ခုရှိပြီး - သူ့ဆီမှာ ရှိတဲ့ Projects နှစ်ခုလုံးက Documentation တွေ Source code တွေကို Developers တွေနဲ့ Code တည်ဆောက်ပုံ လေ့လာလိုသူ မည်သူကိုမဆို လေ့လာနိုင်အောင် Chromium projects က Free တင်မက Open-source အဖြစ်နဲ့ပါ ပေးထားပြီး Chromium projects မှာ ပါဝင်မျှဝေနိုင်လာအောင် ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ် - ဒီ Chromium projects မှာ ဘက်ပေါင်းစုံက Developers တွေ ပြင်ဆင်တည်ဆောက်ရာက ရလာတဲ့ Source code ကို Google က ယူပြီး သူ့ အဲ့ဒီ့ Source code က ဟာကွက်တွေကို ထပ်ရှာတယ် - ထပ်ဖြည့်တယ် - Flash Player လေးထည့်တယ် - Google ဆိုတဲ့ Name နဲ့ Logo ကိုတပ်တယ် - GoogleUpdate လို့ ခေါ်တဲ့ auto-updater system လေးထပ်ပေါင်းတယ် - စသဖြင့် တစ်ခြား တိုတိုထွာထွာလေးတွေ ထပ်ဖြည့်ပြီး ခု ကျွန်တော်တို့ သိထားတဲ့ Google Chrome ဆိုပြီး ဖြစ်လာတာပါ - ကျွန်တော် ဒီလို ပြောလိုက်လို့ Google က Chromium projects က ရင်းမြစ်ကို မတရားသဖြင့် ယူသုံးနေတယ်လို့ ဆိုလိုသလို ဖြစ်နေတယ် - ကျွန်တော် အဲ့လို ဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး - ဒါတွေအားလုံးက တရားဝင်လုပ်ဆောင်နေကြတာပါ - Chromium projects အဖြစ် စတင်ခဲ့ပေမယ့် Google Chrome ဆိုပြီး အောင်မြင်လာတဲ့ အချိန်မှာ Chromium ကို ဘယ်သူမှ မသိကြတော့ဘူး - သိတဲ့သူတွေကျတော့လည်း Chromium ဆိုတာကို ဘယ်သူမှ စိတ်မဝင်စားကြတော့ဘူး - နောက်ကွယ်က အဓိက ဇာတ်ဆောင်မင်းသား Chromium က ဇာတ်ပို့ တစ်ယောက်အဖြစ်နဲ့ပဲ မထင်မရှားဇနပုဒ်မှာ အရောင်ခပ်မှိန်မှိန်နဲ့ ကျန်နေရစ်ခဲ့ရတယ်။
ဒီလို အဖြစ်အပျက်တွေဟာ Open-source projects တွေတိုင်း ရင်ဆိုင်ကြရတာပါ - ဒါပေမယ့် Chromium ကို အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် တည်ဆောက်ပေးခဲ့ကြတဲ့ ဘယ် Developers မှာ ဒါကို မကျေမနပ် မဖြစ်ကြဘူး - သူတို့အားလုံးရဲ့ ဦးတည်ချက်ဖြစ်တဲ့ လူ့ပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ လူသားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ရည်ရွယ်ချက်က အောင်မြင်ခဲ့တယ်လေ - လွတ်လပ်ရေးအတွက် တိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ကြပြီး လွတ်လပ်ရေးရသကို မခံစားခဲ့ကြရရှာတဲ့ မြန်မာမျိုးချစ် အာဇာနည် သူရဲကောင်းတွေလိုပဲ အရှိန်အဝါနဲ့ ကျော်ကြားမှုကို သူတို့ မပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြရပေမယ့် မြင့်မြတ်တဲ့ သူတို့ရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ စိတ်ဓာတ်ဟာ ကမ္ဘာတည်သရွေ့ သမိုင်းမှာ မှတ်တမ်းတင်ကျန်ရစ်ခဲ့တယ် - ဒါကို ကျွန်တော်တို့က Open-source လို့ ခေါ်ပါတယ်။
Google Chrome ရဲ့ နောက်ကွယ်က သမိုင်းကြောင်းကို သူတို့တွေက ခုလို ရှင်းပြခဲ့ကြပါတယ် -
Google Chrome နဲ့ Chromium ၏ ကွာခြားချက်များ
Photo from fergytech.com
Google Chrome ဟာ End user တွေ အတွက် အဓိက ဦးတည်ပြီး Google က ထုတ်ထားတာ မို့လို့ Freeware ပေးတဲ့ Software sites မှန်သမျှ တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလုပ်ချလို့ ရသလို google.com/chrome မှာလည်း တိုက်ရိုက် ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါတယ် - Chromium ကတော့ Developers နဲ့ Code တွေအကြောင်း လေ့လာလိုသူ - အသစ်အသစ်တွေကို စမ်းသပ်ချင်သူများအတွက် ဦးတည်ချက်ထားတာ မို့လို့ သူ့ရဲ့ မူရင်းဆိုဒ် မှာ End users အတွက် သီးသန့် Build လုပ်ပြီး မြင်သာအောင် တင်ထားပေးတယ် ဆိုတာမျိုး မရှိပဲ - အသုံးပြုချင်ရင် ကိုယ်ကိုယ်တိုင် built or debugged လုပ်ပြီးမှ Chromium ကို သုံးကြရပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ခြောက်ပစ်ကင်း သဲလည်းစင်ကိုမှ သုံးချင်တဲ့သူ Code အကြောင်းကိုလည်း နားမလည်သူ - အသစ်ကိုလည်း မစမ်းသပ်ချင်သူတွေဟာ End users တွေအတွက် သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ Google Chrome လို့ ခေါ်တဲ့ Stable ဖြစ်ပြီးသား Versions တွေကို အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်ပါတယ် - Open-source browser "Chromium" ကတော့ Code တွေရဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံကို နားလည်တဲ့ Developers တွေ - Code တွေရဲ့ တည်ဆောက်ပုံကို လေ့လာလိုသူ Advanced users တွေ - အသစ်အသစ်ဆိုတာတွေကိုမှ စမ်းသပ်လိုသူတွေအတွက် အသုံးပြုဖို့ သင့်တော်ပါတယ် - Google Chrome နဲ့ Chromium ကြားက ဆက်စပ်ပုံအဆင့်ဆင့်ကို အကြမ်းဖျဉ်း လေ့လာရင် အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အဆင့် လေးဆင့် ထွက်ပါတယ်။
1) Google Chrome (stable)
Users တော်တော်များများက ပြဿနာကင်းပြီး အလုပ်ရှုပ်သက်သာတဲ့ Google Chrome ဆိုတဲ့ Stable channel မှာပဲ နေကြတဲ့သူများတယ် - Stable channel ဆိုတဲ့အတိုင်း Google Chrome ဟာ Beta channel မှာ စေ့စေ့စပ်စပ် စမ်းသပ်ရင်း အားနည်းချက် တစ်ခုခုတွေ့ပြီ ဆိုတာနဲ့ ချက်ချင်းပြင်ပြီး Update လုပ်ပေးနေတယ် - ဒါပေမယ့် Google Chrome ရဲ့ Source code ဟာ Chromium ကို အခြေခံပြီး ပြည့်စုံအောင်တည်ဆောက်ထားတာမို့လို့ latest features တွေ Chromium လောက် ဘယ်တော့မှ မစုံဘူး - ဒါ့ကြောင့် Google Chrome ကိုသုံးမယ်ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ Stable channel အောက်မှာပဲ နေလို့ ရမယ်။ Chromium browser လောက် latest features တွေ ဘယ်တော့မှ မရနိုင်ဘူး -
2) Google Chrome beta
သူကတော့ latest features တွေကို သုံးလည်းသုံး - ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာလေးတွေကိုလည်း ကူညီ ဖြေရှင်းပေးချင်တယ်ဆိုတဲ့ Users မျိုးတွေ အသုံးပြုသင့်တဲ့ Dev channel ရဲ့အထက် Beta channel အောက်က Versions တစ်မျိုးပါ - ဒါ့ကြောင့် Beta channel မှာ ရှိနေတဲ့ Google Chrome ဟာ Dev channel မှာရှိနေတဲ့ Google Chrome ထက်ပိုပြီး Stable ဖြစ်တယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်။
3) Google Chrome dev
Dev channel ဆိုတာ developer preview channel ကို ဆိုလိုတာပါ - Dev channel မှာ Google Chrome ဟာ new features တွေပါတယ်ဆိုပေမယ့် တော်တော်ကို မတည်မငြိမ် ဖြစ်နေတဲ့ ( unstable ) အနေအထားမှာ ရှိပါတယ် - ဘယ်သူတွေ သုံးသင့်သလဲဆိုရင် Developers တွေ - ဖြစ်တဲ့ ပြဿနာတွေကို ကူညီ ဖြေရှင်းပေးချင်တဲ့ Code အကြောင်းနားလည်သူတွေ - စမ်းသပ်ချင်သူတွေ သုံးနိုင်ပါတယ်။
သူကတော့ လုံးဝ အသစ်ချပ်ချွတ် - Latest အကျဆုံး features တွေကိုမှ အသုံးပြုချင်သူတွေ - စမ်းသပ်စစ်ဆေးချင်သူတွေ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ် - အမြဲ နောက်ဆုံးပြေးနေတဲ့ Versions ဖြစ်နေတာမို့လို့ bug တာတွေလည်း ရှိသလို - Chromium ဟာ Google chrome မှာပါတဲ့ Crash reporting တို့ - PDF support တို့ - Google updater တို့ ... စသဖြင့် ပါမှာ မဟုတ်ပါဘူး - ဒါပေမယ့် သိထားဖို့ ကောင်းတာ တစ်ခုက Chromium ဟာ အခု Version 11.0.662.0 (73953) ကို ရောက်နေပြီ - Google Chrome က လတ်တလော နောက်ဆုံး Beta တောင် ခုမှ 10.0.648.18 ပဲ ရှိပါသေးတယ်။
Open-source browser "Chromium" အား အသုံးပြုခြင်း
Open-source browser "Chromium" ကို Open-Source ဖြစ်တဲ့ Ubuntu နဲ့ တစ်ခြား Linux distros တွေမှာတော့ Software center တွေကနေ တိုက်ရိုက် သွင်းယူလို့ ရပေမယ့် Windows မှာ သုံးချင်ရင်တော့ ရှာရခက်ပါတယ် - Chromium ကို သုံးချင်ရင် ကိုယ့်ဘာသာ Build လုပ်ပြီး သုံးရမယ်လို့ ကျွန်တော် အထက်မှာ ပြောခဲ့ပေမယ့် Build လုပ်ပြီးသား .exe ကို အသင့်ယူသုံးနိုင်တဲ့ နေရာတွေ ရှိပါသေးတယ်။
အထက်က ပုံမှာ ဖော်ပြထားတဲ့ အတိုင်း chromium-rel-xp/ ကို ဆက်ဝင်ပါ -
Last modified ကိုနှိပ်ပြီး Latest ဆိုတာရဲ့ အောက်က နောက်ဆုံး folder ထဲကို ဆက်ဝင်ပါ -
အောက်ဆုံးမှာ ရှိနေတဲ့ mini_installer.exe ကို Download ချပြီး စက်မှာ တင်လိုက်ပါ -
ဒါဆို အောက်ဖော်ပြပါအတိုင်း Google chrome နဲ့ အပြိုင် Open-source browser "Chromium" ကို စက်မှာ သုံးလို့ ရပါပြီ။
ခုဖော်ပြခဲ့သလောက်ဆိုရင် Google Chrome ရဲ့ သမိုင်းဖြစ်ရပ်တစ်ချို့ - Chromium ရဲ့ ပါဝင်ပတ်သတ်မှုနဲ့ Open-Source ရဲ့ သဘောသဘာဝကို မိသားစုဝင်များ နားလည်နိုင်ကြလိမ့်မယ် ထင်ပါတယ်။
Browser Google How to Internet